Jenesis 49 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Amụma Jekọb buru mgbe ọ na-anwụ (1-28)
Shaịlo ga-esi n’agbụrụ Juda (10)
Jekọb kwuru ebe ọ chọrọ ka e lie ya (29-32)
Jekọb nwụrụ (33)
49 Jekọb kpọrọ ụmụ ya ndị nwoke, sị ha: “Zukọtanụ ka m gwa unu ihe ga-eme ná ndụ unu n’ọdịnihu.* 2 Unu ụmụ Jekọb, zukọtanụ gee ntị. Geenụ Izrel nna unu ntị. 3 “Ruben,+ ọ bụ gị bụ ọkpara m,+ ike m na onye m bu ụzọ mụọ.* Ọ bụ gị ka a kacha akwanyere ùgwù, ọ bụkwa gị kacha dị ike. 4 Ma, ị gaghị akarị ụmụnne gị ebe ọ bụ na i mere ka idei mmiri na-ekwo ekwo wee ghara ijide onwe gị, n’ihi na i dinara nwunye* nna gị.+ N’eziokwu, i dinara nwunye m. Ọ bụ ihe i mere. 5 “Simiọn na Livaị bụ ụmụnne.+ Ha ji mma agha ha gbuo ndị mmadụ.+ 6 Mkpụrụ obi m,* gị na ha akpala. Obi m,* esonyela n’òtù ha, n’ihi na ha ji iwe gbuo ụmụ nwoke,+ ha sekwara ehi akwara iji mee onwe ha obi ụtọ. 7 Ana m abụ iwe ha na ọnụma ha ọnụ n’ihi na o mere ka ha mee ihe jọgburu onwe ya na ihe na-agbawa obi.+ Ka m kesaa ha n’ebe dị iche iche n’ala Jekọb, ka m meekwa ka ha gbasasịa n’ala Izrel.+ 8 “Ma Juda,+ ụmụnne gị ga-eto gị.+ Ị ga-emeri ndị iro gị.*+ Ndị nna gị mụrụ ga-akpọrọ gị isiala.+ 9 Juda bụ nwa ọdụm.+ Nwa m, ị ga-ebili ma i richaa anụ i gburu. Ọ makpurula, ọ gbatịakwala onwe ya ka ọdụm. Ebe ọ dị ka ọdụm, ònye ga-anwa anwa chọọ ya okwu? 10 Mkpanaka eze agaghị apụ apụ na Juda,+ mkpara onye na-achị achị agaghịkwa apụ n’agbata ụkwụ ya, ruo mgbe Shaịlo* ga-abịa.+ Ọ* bụ ya ka mba dị iche iche ga-erubere isi.+ 11 Ọ ga-eliwe jakị ya n’osisi vaịn, liwekwa nwa jakị ya n’ezigbo osisi vaịn. Ọ ga-eji mmanya saa ákwà ya, jirikwa mmanya a zọchapụtara ná mkpụrụ vaịn saa uwe ya. 12 Anya ya na-acha ọbara ọbara n’ihi mmanya, ezé ya na-achakwa ọcha n’ihi mmiri ara ehi.* 13 “Zebulọn+ ga-ebi n’ụsọ oké osimiri, n’ikpere mmiri ebe a na-adọsa ụgbọ mmiri.+ Ngwụcha ngwụcha ókè ya ga-abụ n’ebe gawara Saịdọn.+ 14 “Ịsaka+ bụ jakị ọkpụkpụ ya siri ike, nke bu ibu abụọ e bukwasịrị ya makpuru ala. 15 Ọ ga-achọpụta na ebe ọ na-ezu ike dị mma nakwa na ala ahụ mara mma. Ọ ga-ehulata ubu ya buru ibu na-anyị arọ, ọ ga-arụkwa ọrụ a manyere ya ịrụ. 16 “Dan+ ga-ekpe ndị ya ikpe. Ọ bụ otu n’ime ebo e nwere n’Izrel.+ 17 Ka Dan bụrụ agwọ nọ n’akụkụ ụzọ, agwọ nwere mpi nke nọ n’akụkụ ụzọ, nke na-ata ịnyịnya arụ n’ikiri ụkwụ, onye na-agba ya ejiri azụ daa.+ 18 Jehova, m ga-echere ruo mgbe ị ga-azọpụta anyị. 19 “Gad,+ ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ga-alụso gị ọgụ, ma ị ga-achụrụ ha n’azụ lụso ha ọgụ.+ 20 “Asha+ ga-enweju nri* enweju, ọ ga na-emepụtakwa ụdị nri ndị eze na-eri.+ 21 “Naftalaị+ bụ nne ele dị garagara. Ọ na-ekwu okwu na-atọ ụtọ.+ 22 “Josef+ bụ alaka nke osisi na-amị mkpụrụ. Ọ bụ alaka nke osisi dị n’akụkụ isi mmiri. Alaka osisi ahụ na-awasa gafere mgbidi. 23 Ma ndị na-agba ụta kpọrọ ya asị. Ha nọ na-enye ya nsogbu, ha gbakwara ya ụta.+ 24 Ma ọ mịpụtaghị ụta ya,+ aka ya sikwara ike ma dị garagara.+ Onye mere ka ọ dị otú ahụ bụ dike na-enyere Jekọb aka, ya bụ, onye na-azụ ya ka atụrụ, onye bụ́kwa nkume Izrel. 25 O* si n’aka Chineke nke nna ya, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nọnyekwaara ya. Ọ ga-enyere gị aka ma gọzie gị. Ọ ga-enye gị mmiri si n’eluigwe na mmiri dị n’osimiri,+ nyekwa gị ọtụtụ ụmụ na ọtụtụ anụ ụlọ. 26 Ngọzi nna gị gọziri gị ga-akarị ihe ọma ndị a na-enweta ná nnukwu ugwu ndị na-adịru mgbe ebighị ebi, karịakwa ihe ndị bara ezigbo uru a na-enweta n’obere ugwu ndị na-adịte aka.+ Ọ bụ Josef, onye a họpụtara n’ime ụmụnne ya, ga na-enweta ngọzi ndị a.*+ 27 “Benjamin+ ga na-adọri ndị iro ya otú anụ ọhịa wolf si adọri anụ.+ N’ụtụtụ, ọ ga-eri ndị iro ya ka anụ. Ná mgbede, ọ ga-eke ihe ndị ọ kwatara.”+ 28 Ọ bụ ná ndị a niile ka e si nweta ebo iri na abụọ nke Izrel. Ọ bụ ihe ndị a ka nna ha gwara ha mgbe ọ na-agọzi ha. Ọ gọziri onye nke ọ bụla n’ime ha otú kwesịrị ekwesị.+ 29 Mgbe ọ gọzichara ha, o nyere ha iwu, sị: “M na-aga ịnwụ otú nna m hà nwụrụ.+ Lienụ m n’ebe e liri nna m hà, n’ọgba dị n’ala Ifrọn onye Het.+ 30 Ọgba ahụ dị n’ala dị na Mak-pila, n’ihu Mamri nke dị na Kenan. Ala ahụ bụ ala Ebreham zụrụ Ifrọn onye Het ka ọ bụrụ ebe ọ ga na-eli ozu. 31 Ọ bụ n’ebe ahụ ka e liri Ebreham na Sera nwunye ya.+ Ọ bụ n’ebe ahụ ka e liri Aịzik+ na Ribeka nwunye ya, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka m liri Lia. 32 Ọ bụ ụmụ Het ka a zụrụ ala ahụ na ọgba dị na ya.”+ 33 Otú a ka Jekọb si nyechaa ụmụ ya ndị nwoke ntụziaka. Ọ chịgoziri ụkwụ ya n’àkwà* ya, dinara ala ma kubie ume. O wee nwụọ otú nna nna ya hà nwụrụ.+
^ Na Hibru, “ná ngwụcha ụbọchị ndị ahụ.”
^ Ma ọ bụ “onye mbụ m ji ike m ji amụ nwa mụọ.”
^ Na Hibru, “ị rịgooro n’àkwà.”
^ Ma ọ bụ “Ùgwù m.”
^ Na Hibru, “Aka gị ga-adị n’olu ndị iro gị.”
^ Shaịlo pụtara “Onye Ọ Bụ nke Ya.”
^ Ọ ga-abụ Shaịlo ka a na-ekwu.
^ Ihe a pụtara na Juda ga-enweju mmanya na mmiri ara ehi enweju.
^ Ya bụ, Josef.
^ Na Hibru, “Ha ga na-adị n’isi Josef.”